जनस्वास्थ्य ‘प्रोटोकल’ उल्लंघन गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्री सबैभन्दा अगाडि – Health Post Nepal
२०७७ साउन १९ गते ११:३०
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार विराटनगरबाट गएको एउटा प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरे।
त्यो प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकाल, मोरङकी नेकपा नेतृ नमिता न्यौपाने र नेचुरल प्याथिक्स अस्पतालका अध्यक्ष जगत बस्नेत थिए।
नेतृ न्यौपानेका अनुसार मन्त्रीकहाँ डेलिगेसनका लागि टोली पुगेको थियो। भेटघाटपछि मन्त्री ढकालको कार्यकक्षमा उनीहरू सबैले फोटो खिचे।
नेतृ न्यौपानेले सो फोटो आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरिन्। सो फोटोमा उनीहरू मास्कविहीन त छन् नै, सामाजिक दूरी पनि कायम गरेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल भेटघाटका लागि सहज व्यक्ति मानिन्छन्, नेता(कार्यकर्तामाझ।
उनलाई कोभिड(१९ को महामारीपछि उनकै मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्य सुरक्षाको ‘प्रोटोकल’ थाहा नभएको हैन। तर, उनी पटक(पटक उक्त ‘प्रोटोकल’ उल्लंघन गरेर मानिसहरूसँग भेटघाट गरिरहेका हुन्छन्।
प्रोटोकलले के भन्छ?
( अति आवश्यक नपरी घरबाट ननिस्कौं
( निस्के पनि भेटघाट गर्दा दुई मिटरको सामाजिक दूरी कायम गरौं। यो दूरी कायम गर्न सकिँदैन भने नजाऔं।
– मास्क अनिवार्य लगाऔं। कपडाकै भए पनि वा पाँच रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्क प्रयोग गरौं।
– साबुन पानीले हात धोऔं नभए सेनिटाइजर प्रयोग गरौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अति संवेदनशील मानेर ‘प्रोटोकल’ लागू गरिएको हो।
उनका अनुसार यो कुनै मन्त्रालयको मन्त्रीलाई मात्र नभएर आम मानिसलाई संक्रामक रोगबाट बच्नका लागि अपनाइएको ‘प्रोटोकल’ हो। यसले संक्रमित नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ मास्क नलगाइकन भेट्दा हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छैन।
‘म मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँ, मैले यसरी प्रोटोकल बिर्सेर गरिएको भेटघाटलाई जनस्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो हो भनेर भन्दिनँ, भन्न मिल्दैन पनि,’ गौतमले भने, ‘यो प्रोटोकल सबैले पालना गर्नुपर्छ।’
‘प्रोटोकल’ पालना नगर्दा के हुन्छ?
प्रवक्ता गौतमले यसबारे संक्षिप्त व्याख्या गरे।
उनका अनुसार कोरोना संक्रमण मुख्य तीन अंगबाट एकबाट अर्कोमा सर्छ। आँखा, नाक र मुख। ‘नाक र मुखबाट सर्छ भनेर मास्क लगाऔं भनिएको हो, आँखा छोप्न साधारण चश्मा लगाए पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाट बच्न यति कुरा ९आँखा, नाक, मुख छोपेर, दुई मिटर० को दूरी कायम गरे पुग्छ। यो यति सामान्य कुरा हो कि, भन्दाभन्दै मानिसहरू किन पालना गर्दैनन्रु’
जहाँसम्म मन्त्री ढकालले यो ‘प्रोटोकल’ मानेका छैनन्, उनलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२२ अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। यो ऐनले मन्त्रीलाई चाहिँ कारबाही नगर भन्दैन।
यो ऐन कडाइसाथ लागू गर्न गृह मन्त्रालय दुई पटक देशभरिका प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकृत उमाकान्त अधिकारीका अनुसार मास्क प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण राजधानी काठमाडौंमा संक्रमणको महामारी फैलिन सक्ने त्रास बढेपछि दोस्रोपटक बिहीबार पुनस् निर्देशन दिनुपरेको हो।
पहिलोपटक उल्लंघन गर्नेलाई सम्झाउने, मास्क दिने गरिएको छ। अर्कोपटक भेटिए जरिवाना तिराइने गरिएको छ।
त्यसपछि पनि नमाने संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन आकर्षित गरेर हिरासतमा लिन सकिने छ। बारम्बार उल्लंघन गर्नेउपर एक महिना कैद र जरिवाना तिराउने यो ऐनमा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पहिलो निर्देशनपछि दुई लाख ८ हजार जना कारबाहीमा परेका छन्। एक लाख ८० हजारलाई सम्झाइएर पठाइएको छ।
१६ हजारलाई मास्क दिएर पठाइएको छ भने ९ हजारलाई जरिवाना गरिएको छ।
‘भिआइपीले त झन् अरूले सिकुन् भनेर मास्क लगाउनुपर्ने हो, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो,’ दाहालले भने।
पहिलो र दोस्रो निर्देशनपछि पनि ढकाल ‘प्रोटोकल’ बिर्सेर मानिसहरू भेटघाट गरिरहेका छन्।
मन्त्री ढकालले त ‘प्रोटोकल’ नाघेकै छन्। संक्रामक ऐनको मर्यादामा पनि चोट पुर्‍याइसकेका छन्।
उनलाई कारबाही हुँदैन?
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालका अनुसार यो ऐन सबैका लागि बराबर हो। पालना नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ। चेतनास्तर कम भएका नागरिकका लागि ‘प्रोटोकल’ सम्झाइएको हो। जान्ने(बुझ्नेले यो प्रोटोकल आफ्नै लागि हो भन्ने बुझेर पालना गर्नुपर्ने हो।
गृहका अनुसार जोखिम बढेको कारणले सबै सतर्क हुनुपर्छ भनेर दोस्रोपटक ‘प्रोटोकल’ सम्झाउनु परेको हो।
प्रजिअ दाहालले अब पनि यो प्रोटोकल नमान्नेलाई पक्रेर सिधै एक महिना कैद हुने गरी कारबाही थालिने बताए। ‘कानुनले भिआइपी र सर्वसाधारण कोही चिन्दैन, पालना नगर्नेलाई अब आक्रामक रुपमा कारबाही थाल्छौं,’ दाहालले भने।